:: My Little World ::: 18 March 2009
Posted by Nay Nay Naing at 3/19/2009 06:42:00 PM
Thursday, March 19, 2009 9:05:00 PM
အစ်မရေ လှလိုက်တာ။ ဒီဓါတ်ပုံကို ဘယ်မှာ သွားရိုက်ခဲ့တာလဲရင် :)
Hey girl, just realize that you have changed your header quote...Itzanice one! It reminded me ofashoutout I once posted "I am in the middle ofamaze without exit but I can see the starry sky"...now, feel like I cant even see the stars anymore... at least you still can see the stars to steer your way...^_^ take care always.
Thursday, March 19, 2009 9:27:00 PM
ဂျီတော့ပုံတင်ချင်လို့ ... ပေးမှာလား...ငှင်....။
အဲဒါ Four leaf clover ပါ။ ကံကောင်းခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကံကောင်းခြင်းတွေ အမြဲရှိနေပါစေ လို့ဆန္ဒပြုတဲ့ သဘောပါ...
Kyaw နဲ့Sin Dan Lar..
ဒီအရွက်ပုံလေးက ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ မဟုတ်ပါဘူး။ Google က တစ်ဆင့် jayflow22.workpress.com ကနေ ယူထားတာပါ။ Post မှာ ဘာမှ မရေးချင်တာနဲ့ပုံတင်ထားတဲ့ Photo Album မှာပဲ ဘယ်ကယူထားတယ် ဆိုတာ ထည့်ထားဖြစ်ခဲ့တယ်။
နေရောင်ကို မမြင်ရတဲ့အခါ လရောင်ကို ရှာမယ်။ လရောင်မရှိတော့ ကြယ်တွေကို မြင်အောင် ကြည့်တာပေါ့။ ကြယ်တွေ့ မမြင်ရတဲ့အခါမှာ.. နောက်ဆုံး ဘယ်အရာကိုမှ အားကိုးလို့ မရတဲ့အခါ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထွန်းညှိလို့ရှေ့ ခရီးဆက်ကြတာပေါ့.. ;) အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ..
ဒါနဲ့"All of us get lost in the darkness, dreamers learn to steer by the stars." ဆိုတာ Rush ရဲ့ "The Pass" ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲက စာသား။ အဲဒီ စာကြောင်းလေးကို ကြိုက်လို့ ။
Friday, March 20, 2009 10:59:00 AM
Saturday, March 21, 2009 12:15:00 AM
အဲဒီလို အရွက်လေးရွက် တွေ့ရဖို့ဆိုတာ အရမ်းရှားတယ်တဲ့ ။ ကံကောင်းတဲ့သူပဲ ရတာတဲ့ ။ ရတဲ့လူကလည်း အိမ်ထောင်ကျတတ်တယ်တဲ့ ။ တကယ်ဖတ်ဖူးတာ ။ ဘယ်မှာလည်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ။း)
ဒီပုံကို ကြည့်ပြီး မနိုင်းနိုင်းစနေ အရင်တုန်းက ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုလေးကို သတိရသွားလို့ share လိုက်ပါတယ်။
Tuesday, March 24, 2009 12:18:00 PM